सर्वोच्चको आदेश विपरीत कान्ति अस्पतालमा अमेरिकी खोप परीक्षण – Nepali Health
सर्वोच्चको आदेश विपरीत कान्ति अस्पतालमा अमेरिकी खोप परीक्षण
२०७५ असार १९ गते ८:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १९ असार । कान्ति बाल अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकामा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रोटा भाइरसविरुद्धको खोप परीक्षण भइररहेको छ ।
अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले झाडापखालको उपचारका लागि अस्पतालमा ल्याइएका बालबालिकामा झन्डै दुई वर्षदेखि उक्त भ्याक्सिन परीक्षण गर्दै आएको छ ।
कान्ति अस्पतालका निर्देशक डा. गणेशकुमार राइले रोटो भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन ‘ट्रायल’ भइरहे पनि औपचारिक रुपमा थाहा नभएको बताए । ‘पूर्वनिर्देशक डा. अजित रायमाझीको पालामा सुरु भएको हो । मलाई त कसैले यसबारे औपचारिक जानकारी पनि दिएको छैन, हल्ला सुनेको मात्रै हो । कति बालबालिकामा परीक्षण गरे, कस्तो परिणाम आयो भन्नेबारे रायमाझीसँगै बुझ्नू’, उनले भने ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन पौडेल, अर्जुन अधिकारीको समाचार
डा. गोविन्द केसी भन्छन्, ‘माफियासंग लागेर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदकै दुरुपयोग गरे’ (भिडियो सहित)
डा. केसीको समर्थनमा कर्णालीका डाक्टरद्धारा ओपिडी बहिस्कार